သင့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာကို တဖြည်းဖြည်းမပျက်စီးရအောင် သတိပြုရမဲ့အချက် ( 13 ) ချက် - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ > သင့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာကို တဖြည်းဖြည်းမပျက်စီးရအောင် သတိပြုရမဲ့အချက် ( 13 ) ချက်
သင့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာကို တဖြည်းဖြည်းမပျက်စီးရအောင် သတိပြုရမဲ့အချက် ( 13 ) ချက်
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 3:06 AM ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ
[Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန်] Laptop တစ်ခုဟာ ယနေ့ခေတ်မှာ လုပ်ငန်းတွေအတွက် လူသုံးများတဲ့ အရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။ ကျွန်မတို့နေ့တိုင်း အများဆုံးအသုံးပြုနေတဲ့အရာဖြစ်သလို အသေးအဖွဲလေးတွေကို ဂရုမစိုက်နိုင်ခဲ့ရင် စက်ကိရိယာတွေထိခိုက်ပြီး တကယ်ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
1.laptop ကိုအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးဝေးထားပါ။
သင့်ရဲ့အချစ်တော်ကြောင်လေးက သင့်ရဲ့လက်တော့ပေါ်ထိုင်နေရင် လာကူညီချင်လို့ဆိုပြီး သင့်ကို ပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်ခဲ့မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ဒီအပြုအမူကိုတော့ ကျွန်မတို့အားမပေးပါဘူး။ ကြောင်တွေရဲ့ ကိုယ်နွေးမှူအပူချိန်ဟာ အလုပ်လုပ်တဲ့ကိရိယာတွေပေါ်သက်ရောက်သွားစေပြီး သူတို့ရဲ့အမွှေးတွေကလည်း ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စနစ်တွေထဲထိ ရောက်နိုင်ပါတယ်။ စက်ရဲ့ရှိသင့်တဲ့အပူချိန်ထက်လွန်ကဲမှူဖြစ်စေပြီး စက်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ထိခိုက်စေတာကြောင့် ကြောင်တွေ လက်တော့ပေါ်တက်တာကို ခွင့်မပြုသင့်ပါဘူးနော်။
ဒါ့အပြင် ကွန်ပျူတာအရှေ့မှာ အစာမစားသင့်ပါဘူး။ အစားအစာအမှူန်အစတွေက ကီးဘုတ်ထဲကျသွားတဲ့အခါ ပိုးဟပ် ပုရွက်ဆိတ်ကဲ့သို့သော မနှစ်မြို့ဖွယ် အကောင်တွေကိုရောက်လာစေပါတယ်။
2. laptop ကိုဂရုတစိုက် ရွှေ့ပါ။
လက်တော့စ်အောက်ခံ အပြားလေး သင့်မှာမရှိရင် လက်တော့စ်ကိုရွေ့ရင် ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါပြီ။ ကွန်ပျူတာသုံး စက်ကိရိယာဓာတ်ပြားဟာ အရမ်းလှူပ်သွားရင် ပျက်စီးနိုင်ပြီး အလွယ်တကူကျိုးပြတ်တတ်တာကြောင့် သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးဆုံးရှူံးရသည်အထိ ဖြစ်စေမှာပါ။
3. လျှပ်စစ်နန်းကြိုးတွေကို သင့်တင့်လျှောက်ပတ်စွာ လိပ်ပါ။
သင်က လျှပ်စစ်နန်းကြိုးတွေကို နန်းကြိုးတွေ ရာဘာတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတာမို့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ထင်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အမှန်ကတော့ ဒါတွေက ပိန်လိမ်သွားခြင်းတွေ ပုံပျက်အောင်တွန့်လိမ် သွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မတို့ရဲ့လက်တော့စ်တွေကို ရွှေ့ချင်ရင် ကြိုးတွေကို သေသေချာချာကျစ်လျစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်။
ဒါတွေကို ဘက်ပဲ့နေတဲ့ ထောင့်တွေ ချွန်ထက်တဲ့ အစွန်အဖျားတွေမှာ မထားသင့်ပါဘူး။ ကြိုးတွေကို ဖာထေးတဲ့အခါမှာလည်း အရမ်းအားစိုက်လို့မရပါဘူး။ ဒါက လျှပ်စစ်ပလက်ခေါင်းကိုအားနည်းစေပြီး မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
နည်းပညာတွေအရ သင်က လက်တော့စ်ကို အလွန်အကျွံအားသွင်းလို့မရပါဘူး။ နောက်ဆုံးပေါ် ဘတ်ထရီတွေဟာ လစ်တီယံ အိုင်းရွန်းတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဘတ်ထရီထိန်းသိမ်းရေးကိရိယာက အလွန်အမင်းအားသွင်းတဲ့အခါ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အလွန်အမင်းအားသွင်းတဲ့အခါ ဘတ်ထရီကအရမ်းပူလာမှာပါ။
5. ဖြေးညင်းစွာ ပိတ်ပြီး ဖြေးညင်းစွာဖွင့်ပါ။
သင်က လက်တော့စ် တစ်ခုလုံးမှာ ကျိုးလွယ်တဲ့အပိုင်းကို ကိုင်ထားရင်တော့ သင်ဟာလက်တော့စ်တစ်ခုကို မရွေးတတ်သေးပါဘူး။ သင်က ထောင့်စွန်းကနေ ကိုင်ထားရင်တော့ ကိုင်ထားတဲ့နေရာမှာဖိအားဖြစ်ပေါ်ကာ ရုတ်တရက်ကွေးသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလယ်နားက ကိုင်ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းအဖွင့် အပိတ်ပြုလုပ်ရပါမယ်။
laptop ကို ဆက်သွယ်ရေးတွေမှာအထောက်ပံ့ဖြစ်စေဖို့ တီထွင်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးမှာ ကျွန်မတို့အချိန်အများစုကို လွှမ်းမိုးလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါက သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့အကောင်းဆုံးနေရာမဟုတ်သေးပါဘူး။ တခြားအဖုံးအကာတွေ ကလေဝင်လေထွက်ပြွန်တွေကို ပိတ်စေနိုင်တာကြောင့် ဘတ်ထရီအပူလွန်ခြင်းကိုဖြစ်စေမှာပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ အအေးခံအဖုံးအကာကိုအသုံးပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
7. laptop ကိုသံလိုက်ဓါတ်တွေနဲ့ဝေးရာမှာထားပါ။
ဒီလိုစက်တွေမှာ အချက်အလက်တွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့ သံလိုက်ဓာတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။သင်က လက်တော့စ်ကို သံလိုက်ဓာတ်အားပြင်းတဲ့အရာနားမှာ သွားထားရင်တော့ သံလိုက်ဓာတ်ပျက်ပြားမှူဖြစ်ကာ သင့်ရဲ့အချက်လက်တွေကို ဆုံးရှူံးစေမှာပါ။ ဒါကြောင့် သံလိုက်ဓာတ်အားကောင်းတဲ့အရာတွေနားမှာ စက်ကိရိယာတွေကိုမထားသင့်ပါဘူး။
သင်က အလောတကြီးဖြစ်နေရင်တောင် ဂရုပြုပါ။ အလျင်စလိုပြုမူတာမျိုး ဒေါသအလျောက်ပြုမူတာမျိုးတွေက ပလက်ပေါက်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပြီး အားသွင်းရာမှာ ပြဿနာများဖြစ်တတ်ပါတယ်။
9. လက်တော့စ် ကာဗာကိုအသုံးပြုပါ။
laptop cover သို့မဟုတ် အိတ်တစ်ခုဟာ ချွန်ထက်တဲ့အနားတွေမပါပဲ နူးညံ့ရပါမယ်။ တကယ်လို့ သင်က ကျောပိုးအိတ်ထဲကိုထိုးသိပ်ပြီး သယ်ရင်တော့ လက်တော့စ်ရဲ့အတွင်းဘက် စက်ကိရိယာတွေကို အလွယ်တကူထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
မျက်နှာပြင်မှန်ကိုသန့်ရှင်းဖို့ ရေတွေ အဝတ်တွေမသုံးရဘူးဆိုတာ ကျွန်မတို့အားလုံးသိထားကြမှာပါ။ နူးညံ့တဲ့အမျှင်လေးတွေပါတဲ့အရာ သို့မဟုတ် လက်တော့စ်ဆေးကိရိယာကို အသုံးပြုရမှာပါ။ မျက်နှာပြင်မှန်က ပါးလွှာတာကြောင့် အရမ်းကြီးဖိပြီးမပွတ်သင့်ပါဘူး။
11. laptop ကိုအချိန်မှန်ပိတ်ပေးပါ။
laptop ကိုအသုံးမပြုသေးရင် ဖွင့်ပြီးမထားပါနဲ့။ အဆက်မပြတ်အသုံးပြုခြင်းက အအေးခံစနစ်နဲ့ အသုံးပြုမှူနှူန်းကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ သင်က တစ်နေ့ကိုအကြိမ်များစွာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အလိုအလျောက်ပိတ်တဲ့စနစ်ကို အသုံးပြုပါ။
12. အရည်တွေကို laptopရဲ့အဝေးမှာထားပါ။
သင်ကlaptopသုံးရင်းနဲ့ ကော်ဖီ သို့မဟုတ် အချိုရည်တွေသောက်တတ်ပါသလား? laptopတွေနဲ့အရည်တွေကို အတူတူရောမထားသင့်တာကျွန်မတို့အကုန်လုံးသိပြီးကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့ ပူတဲ့ဖျော်ရည်က မဖိတ်ရင်တောင် အန္တရာယ်ရှိစေပါတယ်။ ပူတဲ့ခွက်တွေကို လက်တော့စ်ဖုံးပေါ်မှာ မထားပါနဲ့ ။ဒါက မျက်နှာပြင်ကြားခံဝတ္ထုကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
13. ကွန်ပျူတာစက်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ စစ်ဆေးဖို့ အထူးကျွမ်းကျင်သူတွေကို မေးမြန်းပါ။
laptopတွေဟာ မည်သို့ပင်ထိန်းသိမ်းရလွယ်သောကိရိယာဖြစ်စေကာမူ ဆော့ဝဲပြဿနာများရှိလာရင် ကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းသင့်ပါဘူး။ ကျွမ်းကျင်သူတွေကိုမေးမြန်းသင့်ပါတယ်။ USB ကိရိယာက သင့်ရဲ့စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာတွေကို စစ်ဆေးတဲ့ အခွင့်အရေးတွေရှိတာကြောင့် မဝယ်သင့်ပါဘူး။ သူတို့မှာ များစွာသောအတိုးအလျော့လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေ ပါရှိတာကြောင့် လပ်တော့စ်ကို ပလက်ထိုးလိုက်တဲ့အခါ ချက်ချင်းအားတွေကို အသုံးပြုမှူနှူန်းဆီပြန်ရောက်သွားပြီး ပျက်စီးစေမှာပါ။
[Unicode ဖွငျ့ဖတျရနျ] Laptop တဈခုဟာ ယနခေ့တျေမှာ လုပျငနျးတှအေတှကျ လူသုံးမြားတဲ့ အရာဝတ်ထုတဈခုဖွဈနပေါပွီ။ ကြှနျမတို့နတေို့ငျး အမြားဆုံးအသုံးပွုနတေဲ့အရာဖွဈသလို အသေးအဖှဲလေးတှကေို ဂရုမစိုကျနိုငျခဲ့ရငျ စကျကိရိယာတှထေိခိုကျပွီး တကယျပကျြစီးစနေိုငျပါတယျ။
1.laptop ကိုအိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျတှနေဲ့ ဝေးဝေးထားပါ။
သငျ့ရဲ့အခဈြတျောကွောငျလေးက သငျ့ရဲ့လကျတော့ပျေါထိုငျနရေငျ လာကူညီခငျြလို့ဆိုပွီး သငျ့ကို ပြျောရှငျမှုပေးနိုငျခဲ့မှာပါ။ ဒါပမေဲ့ဒီအပွုအမူကိုတော့ ကြှနျမတို့အားမပေးပါဘူး။ ကွောငျတှရေဲ့ ကိုယျနှေးမှူအပူခြိနျဟာ အလုပျလုပျတဲ့ကိရိယာတှပေျေါသကျရောကျသှားစပွေီး သူတို့ရဲ့အမှေးတှကေလညျး ဖှဲ့စညျးထားတဲ့စနဈတှထေဲထိ ရောကျနိုငျပါတယျ။ စကျရဲ့ရှိသငျ့တဲ့အပူခြိနျထကျလှနျကဲမှူဖွဈစပွေီး စကျရဲ့လုပျဆောငျမှုတှကေို ထိခိုကျစတောကွောငျ့ ကွောငျတှေ လကျတော့ပျေါတကျတာကို ခှငျ့မပွုသငျ့ပါဘူးနျော။
ဒါ့အပွငျ ကှနျပြူတာအရှမှေ့ာ အစာမစားသငျ့ပါဘူး။ အစားအစာအမှူနျအစတှကေ ကီးဘုတျထဲကသြှားတဲ့အခါ ပိုးဟပျ ပုရှကျဆိတျကဲ့သို့သော မနှဈမွို့ဖှယျ အကောငျတှကေိုရောကျလာစပေါတယျ။
2. laptop ကိုဂရုတစိုကျ ရှပေ့ါ။
လကျတော့ဈအောကျခံ အပွားလေး သငျ့မှာမရှိရငျ လကျတော့ဈကိုရှရေ့ငျ ဂရုစိုကျဖို့လိုအပျပါပွီ။ ကှနျပြူတာသုံး စကျကိရိယာဓာတျပွားဟာ အရမျးလှူပျသှားရငျ ပကျြစီးနိုငျပွီး အလှယျတကူကြိုးပွတျတတျတာကွောငျ့ သငျ့ရဲ့အခကျြအလကျတှအေားလုံးဆုံးရှူံးရသညျအထိ ဖွဈစမှောပါ။
3. လြှပျစဈနနျးကွိုးတှကေို သငျ့တငျ့လြှောကျပတျစှာ လိပျပါ။
သငျက လြှပျစဈနနျးကွိုးတှကေို နနျးကွိုးတှေ ရာဘာတှနေဲ့ပွုလုပျထားတာမို့ ဘာမှမဖွဈပါဘူးလို့ထငျမှာပါ။ ဒါပမေဲ့ အမှနျကတော့ ဒါတှကေ ပိနျလိမျသှားခွငျးတှေ ပုံပကျြအောငျတှနျ့လိမျ သှားတာတှဖွေဈနိုငျပါတယျ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ကြှနျမတို့ရဲ့လကျတော့ဈတှကေို ရှခေ့ငျြရငျ ကွိုးတှကေို သသေခြောခြာကဈြလဈြအောငျလုပျရပါမယျ။
ဒါတှကေို ဘကျပဲ့နတေဲ့ ထောငျ့တှေ ခြှနျထကျတဲ့ အစှနျအဖြားတှမှော မထားသငျ့ပါဘူး။ ကွိုးတှကေို ဖာထေးတဲ့အခါမှာလညျး အရမျးအားစိုကျလို့မရပါဘူး။ ဒါက လြှပျစဈပလကျခေါငျးကိုအားနညျးစပွေီး မလိုလားအပျတဲ့ပွဿနာတှဖွေဈစနေိုငျပါတယျ။
နညျးပညာတှအေရ သငျက လကျတော့ဈကို အလှနျအကြှံအားသှငျးလို့မရပါဘူး။ နောကျဆုံးပျေါ ဘတျထရီတှဟော လဈတီယံ အိုငျးရှနျးတှနေဲ့ပွုလုပျထားတာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ဘတျထရီထိနျးသိမျးရေးကိရိယာက အလှနျအမငျးအားသှငျးတဲ့အခါ အန်တရာယျဖွဈနိုငျပါတယျ။ အလှနျအမငျးအားသှငျးတဲ့အခါ ဘတျထရီကအရမျးပူလာမှာပါ။
5. ဖွေးညငျးစှာ ပိတျပွီး ဖွေးညငျးစှာဖှငျ့ပါ။
သငျက လကျတော့ဈ တဈခုလုံးမှာ ကြိုးလှယျတဲ့အပိုငျးကို ကိုငျထားရငျတော့ သငျဟာလကျတော့ဈတဈခုကို မရှေးတတျသေးပါဘူး။ သငျက ထောငျ့စှနျးကနေ ကိုငျထားရငျတော့ ကိုငျထားတဲ့နရောမှာဖိအားဖွဈပျေါကာ ရုတျတရကျကှေးသှားတာမြိုးဖွဈတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အလယျနားက ကိုငျပွီး ဖွညျးဖွညျးခငျြးအဖှငျ့ အပိတျပွုလုပျရပါမယျ။
laptop ကို ဆကျသှယျရေးတှမှောအထောကျပံ့ဖွဈစဖေို့ တီထှငျခဲ့ပွီး နောကျဆုံးမှာ ကြှနျမတို့အခြိနျအမြားစုကို လှမျးမိုးလာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒါက သငျ့ရဲ့အခကျြအလကျတှကေို ထိနျးသိမျးဖို့အကောငျးဆုံးနရောမဟုတျသေးပါဘူး။ တခွားအဖုံးအကာတှေ ကလဝေငျလထှေကျပွှနျတှကေို ပိတျစနေိုငျတာကွောငျ့ ဘတျထရီအပူလှနျခွငျးကိုဖွဈစမှောပါ။ အကောငျးဆုံးကတော့ အအေးခံအဖုံးအကာကိုအသုံးပွုခွငျးပဲဖွဈပါတယျ။
7. laptop ကိုသံလိုကျဓါတျတှနေဲ့ဝေးရာမှာထားပါ။
ဒီလိုစကျတှမှော အခကျြအလကျတှကေိုသိမျးဆညျးဖို့ သံလိုကျဓာတျတှပေါဝငျပါတယျ။သငျက လကျတော့ဈကို သံလိုကျဓာတျအားပွငျးတဲ့အရာနားမှာ သှားထားရငျတော့ သံလိုကျဓာတျပကျြပွားမှူဖွဈကာ သငျ့ရဲ့အခကျြလကျတှကေို ဆုံးရှူံးစမှောပါ။ ဒါကွောငျ့ သံလိုကျဓာတျအားကောငျးတဲ့အရာတှနေားမှာ စကျကိရိယာတှကေိုမထားသငျ့ပါဘူး။
သငျက အလောတကွီးဖွဈနရေငျတောငျ ဂရုပွုပါ။ အလငျြစလိုပွုမူတာမြိုး ဒေါသအလြောကျပွုမူတာမြိုးတှကေ ပလကျပေါကျကိုထိခိုကျစနေိုငျပွီး အားသှငျးရာမှာ ပွဿနာမြားဖွဈတတျပါတယျ။
9. လကျတော့ဈ ကာဗာကိုအသုံးပွုပါ။
laptop cover သို့မဟုတျ အိတျတဈခုဟာ ခြှနျထကျတဲ့အနားတှမေပါပဲ နူးညံ့ရပါမယျ။ တကယျလို့ သငျက ကြောပိုးအိတျထဲကိုထိုးသိပျပွီး သယျရငျတော့ လကျတော့ဈရဲ့အတှငျးဘကျ စကျကိရိယာတှကေို အလှယျတကူထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။
မကျြနှာပွငျမှနျကိုသနျ့ရှငျးဖို့ ရတှေေ အဝတျတှမေသုံးရဘူးဆိုတာ ကြှနျမတို့အားလုံးသိထားကွမှာပါ။ နူးညံ့တဲ့အမြှငျလေးတှပေါတဲ့အရာ သို့မဟုတျ လကျတော့ဈဆေးကိရိယာကို အသုံးပွုရမှာပါ။ မကျြနှာပွငျမှနျက ပါးလှာတာကွောငျ့ အရမျးကွီးဖိပွီးမပှတျသငျ့ပါဘူး။
11. laptop ကိုအခြိနျမှနျပိတျပေးပါ။
laptop ကိုအသုံးမပွုသေးရငျ ဖှငျ့ပွီးမထားပါနဲ့။ အဆကျမပွတျအသုံးပွုခွငျးက အအေးခံစနဈနဲ့ အသုံးပွုမှူနှူနျးကို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။ သငျက တဈနကေို့အကွိမျမြားစှာအသုံးပွုမယျဆိုရငျ အလိုအလြောကျပိတျတဲ့စနဈကို အသုံးပွုပါ။
12. အရညျတှကေို laptopရဲ့အဝေးမှာထားပါ။
သငျကlaptopသုံးရငျးနဲ့ ကျောဖီ သို့မဟုတျ အခြိုရညျတှသေောကျတတျပါသလား? laptopတှနေဲ့အရညျတှကေို အတူတူရောမထားသငျ့တာကြှနျမတို့အကုနျလုံးသိပွီးကွမှာပါ။ဒါပမေဲ့ ပူတဲ့ဖြျောရညျက မဖိတျရငျတောငျ အန်တရာယျရှိစပေါတယျ။ ပူတဲ့ခှကျတှကေို လကျတော့ဈဖုံးပျေါမှာ မထားပါနဲ့ ။ဒါက မကျြနှာပွငျကွားခံဝတ်ထုကို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။
13. ကှနျပြူတာစကျပိုငျးဆိုငျရာပစ်စညျးမြား စဈဆေးဖို့ အထူးကြှမျးကငျြသူတှကေို မေးမွနျးပါ။
laptopတှဟော မညျသို့ပငျထိနျးသိမျးရလှယျသောကိရိယာဖွဈစကောမူ ဆော့ဝဲပွဿနာမြားရှိလာရငျ ကိုယျတိုငျမဖွရှေငျးသငျ့ပါဘူး။ ကြှမျးကငျြသူတှကေိုမေးမွနျးသငျ့ပါတယျ။ USB ကိရိယာက သငျ့ရဲ့စကျပိုငျးဆိုငျရာကိရိယာတှကေို စဈဆေးတဲ့ အခှငျ့အရေးတှရှေိတာကွောငျ့ မဝယျသငျ့ပါဘူး။ သူတို့မှာ မြားစှာသောအတိုးအလြော့လုပျနိုငျတဲ့အရာတှေ ပါရှိတာကွောငျ့ လပျတော့ဈကို ပလကျထိုးလိုကျတဲ့အခါ ခကျြခငျြးအားတှကေို အသုံးပွုမှူနှူနျးဆီပွနျရောကျသှားပွီး ပကျြစီးစမှောပါ။
သင့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာကို တဖြည်းဖြည်းမပျက်စီးရအောင် သတိပြုရမဲ့အချက် ( 13 ) ချက် Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 3:06 AM Rating:5[Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန်] Laptop တစ်ခုဟာ ယနေ့ခေတ်မှာ လုပ်ငန်းတွေအတွက် လူသုံးများတဲ့ အရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။ ကျွန်မတို့နေ့တိုင်း အများဆုံးအသု...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 3:06 AM